Izikhokelo zokukhetha eyona ilulanyelo lufanelekileyo | Amadoda aQinisekileyo
Ukhetho lweziyobisi esiza kulusebenzisa ebomini ayisosigqibo esithathwa kancinci. Mamaxesha amaninzi Impumelelo kummandla wentlalo ixhomekeke kwimbonakalo yokuqala. Kwaye ivumba elibi okanye ihempe engasivumeli ukuba siphakamise izandla ngenxa yeentloni, ayisosiqalo esihle.
Udliwanondlebe lomsebenzi, usuku lokuthandana, okanye ulungile unxibelelwano lwasentlalweni mihla le nabanye abantu, bafuna ucoceko olululo ... kunye neziyobisi ezifanelekileyo.
1 Injani into yokuhambisa deodorant?
2 Iindidi zolusu kunye neziyobisi
Injani into yokuhambisa deodorant?
Into yokuqala ekufuneka siyithathele ingqalelo kukukhetha imveliso eyenza umsebenzi ophindwe kabini: deodorant (ukunqanda amavumba amabi) kunye Abaphikisi (ukunciphisa ukubila). Ewe kubalulekile ukugcina engqondweni: ukubila yinkqubo eyimfuneko emzimbeni wethu, kufuneka siphephe iimveliso ezithintela ukubila, ngakumbi emva kokwenza umthambo.
Amaxesha amaninzi ukhetho lweemveliso ezithile lubangelwa kuphela ukuthanda kwakho: ngaphandle kweziqholo okanye ivumba elomeleleyo, umzekelo. Kukwanjalo nakwinkcazo-ntetho: ukutshiza, ukuqengqeleka, intonga okanye ijeli.
Iindidi zolusu kunye neziyobisi
Ngokutsho uhlobo lolusu kunye nezinye iimpawu ezithile, kukho izikhokelo zokugcina engqondweni:
Kwibar: ezi mveliso zihlala zisebenza ixesha elifutshane. Kwiimeko zokubila kakhulu, zezona zilungileyo.
Ukuqhutywa: iingcali zihlala zicebisa le ntetho kumnumzana imisebenzi emininzi yomzimba. Inqaku elinye elithandwayo kukuba asekwe emanzini, kwaye xa uhlamba, akukho mkhondo wemveliso kulusu.
Tshiza: le ntetho ilungele abo ba kwimisebenzi engapheliyo ingayeki. Ukufunxa kwayo kuyakhawuleza, ngenxa yoko ayizishiyi iintsalela ezinokubambelela kwimpahla.
Utywala obungenazotywala zezona zicetyiswayo kwezabo ulusu olubuthathaka.
Ezinye iidermatologists azikukhuthazi ukusetyenziswa kwe iimveliso eziqukethe i-aluminium (Izinto ezikhoyo kwizichasi) kuba ukusetyenziswa kwexesha elide kunokubangela ukucaphuka.
Imithombo yemifanekiso: Belleza.top / IPunto Fape
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Zokuthambisa » Uyikhetha njani i-deodorant eya kukukhapha ebomini?
Kwenzeka ntoni emzimbeni wakho xa ungalalanga kakuhle?
Unyango lokucoca umzimba wakho